Kukhucululwe ipaki eseliyisidleke sezidakamizwa | News24
Kukhucululwe ipaki eseliyisidleke sezidakamizwa
ISITHOMBE: nokthula NtuliKutholwe inqwaba yamabhodela emithi ngesikhathi kukhucululwa.
IMeya yoMasipala uMsunduzi uMnu Themba Njilo isithembise ukuthi izovala ipaki esemakethe nathi seyiphenduke isidleke sokusetshenziselwa khona izidakamizwa.
Lokhu kulandela ngemuva kokuba kutholwe inqwaba yabafundi abafunda ezikoleni ezahlukene ezasedolobheni kanye nangaphandle zihlangene khona zingayile esikoleni ngesikhathi sokufunda.
Lokhu kwenzeke ngoLwesine olwedlule ngesikhathi kunohlelo lokukhuculula idolobha obeluhlanganisa amaphoyisa, umasipala, kanye noMnyango wezeMvelo nobuholwa uNks Barbara Thompson.
Abafundi batholwe behleli bengamaqoqo kanti abanye bebephethe ngisho izimpahla zokushintsha sebekhiphe umfanisano ukuze kungeke kubonakale ukuba bangabafundi.
Kule ndawo kuphindwe kwatholwa inqwaba yamagobhozi emithi yokukhwehlela kanye nonemenaydi nokusolwa ukuthi lezi zingane bezikuhlanganisa zikwenze iziphuzo esidakayo esibizwa ngokuthi ‘incika’ bese ziyaphuza.Kuphindwe kwatholwa namakhekhe anensangu phakathi.
Imeya uNjilo uthe :“Indlela ekuyiyona engcono yokuthi sibhekane nalenkinga eyenzeka lana ukuthi kusetshenziswe lendawo ukusebenzisa izidakamizwa ukuthi kungcono sivele siyivale le ndawo.Bengithi ngizoqala ngixoxisane nobuholi mayelana nokuyivala kodwa ngemuva kwento engiyibonile ngibone kungcono ukuthi ngiyivale zisuka,” kusho uNjilo.
Lezi zingane ezingaphezu kwamashumi amahlanu zihanjiswe esiteshini samaphoyisa esiseMgungundlovu nokuyilapho zifike zalandwa khona ngabazali bazo ezinye zalandwa ngothisha basezikoleni lapho zifunda khona.
Okhulumela isiteshi samaphiyisa i-Pietermaritzburg Police Station uKapteni Khosi Khonjelwayo ukuqinisekisile ukuthi abafundi bahanjiswe esiteshini kwabe sekufonelwa abazali babo kanye nothisha babo. Uthe kutholakale izinto eziningi okubalwa kuzona namaphilisi obekungakacaci ukuthi awani.
“Kutholwe abafundi abangaphezu kuka-50 akade behleli kulendawo kodwa izinto lezi azitholakalanga kuzona zitholwe lapho kade behleli khona nabo.Kutholwe nonomenaydi nokusolwa ukuthi iwona okade usetshenziswa ukuhlanganisa nomuthi wokukhwehlela.
“Njengamaphoyisa njengoba sesibonile ukuthi lendawo isiqala ukuba inkinga sesizosiqinisa kakhulu isandla ekwenzeni isiqiniseko sokuthi siyayigada njalo le ndawo,” kubeka yena.